Xildhibaan Jaabiri oo ragga u jeediyay in ay abaabulaan kacdoono ay kaga soo horjeedaan falkii ka dhacay Gaalkacyo – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdiraxmaan Jaabiri oo ka tirsan golaha wakiillada Puntland kana mid ahaa mudanayaal maanta shir jaraa’id si adag u dhaleeceeyay falkii ka dhacay Galkacyo ayaa ka hadlay sida ay bulshadu uga falceliyay kiiskaas.
Wuxuu sheegay in dadweyne u badan dumar iyo carruur ay Gaalkacyo ka sameeyeen mudaharaad ay ku muujinayaan siday uga xun yihiin falka isugu jiray dilka iyo kufsiga ee loo geystay Caasho Ilyaas Aadan oo 12 jir ah.
“Nooma muuqan wax rag ah oo arrintaas kacdoon ka sameeyay, waxaan doonaynaa in ay muujiyaan; rag baa dhibaatada sameeyay dumar ma samayn dhibta, waxaa loo haystaa waa rag. Raggu waa in ay muujiyaan dhibaatada dhacday in ay ka xun yihiin” Ayuu yiri Xildhibaan Jaabiri
Mudanaha oo ka mid ah xubnaha cusub ee dhowaan la doortay wuxuu sheegay in dowladdu ay tahay in ay dhawrto sharafta dadka Puntland, taasna ay tahay waajibka waxa ay u xilsaaran yihiin hay’adaha kala duwan dowladdu.
Madaxtooyadda Puntland, hay’adda xuquuqda Aadanaha, golaha wakiillada, ururada bulshada rayidka ah ayaa si kulul uga hadlay kiiskaas, waxayna soo jeediyeen in baaritaan dhab ah lagu sameeyo falkaas, cadaaladdana la dhadhansiiyo ciddii uu ku cadaado.
Bulshada rayidka ah iyo Baarlamanka Puntland oo odoyaasha qabaa’ilka u jeediyay in aysan garab-siin kiisaska ka dhanka ah dumarka